Hanova ny haben'ny Bin - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Ny Filan-kevitry ny Central Coast dia manolotra ho an'ny mponina ny safidin'ny 140 litatra, 240 litatra na 360 litatra amin'ny sarony mena mena ary koa ny 240 litatra na 360 litatra amin'ny fako fako mavo ho ampahany amin'ny serivisy fako ao an-tranonao.
Ahenao ny habenao
Mitahiry vola ary ampio ny tontolo iainana amin'ny fampihenana ny haben'ny dabanao. Amin'ny fisafidianana ny koba kely 140 litatra na 240 litatra fa tsy ny safidy lehibe kokoa dia azonao atao ny mitahiry ny fako isan-taona. Tsy misy sarany ny fampihenana ny haben'ny dabam-pako.
Ampitomboy ny haben'ny dabanao
Raha hitanao fa mitobaka tsy an-kijanona ny dabam-pako, dia azonao atao ny manavao amin'ny koba mena lehibe kokoa ho an'ny sara fanampiny fanampiny ampidirina amin'ny saran'ny filankevitry ny fanananao.
Ny tompon-trano ihany no afaka mangataka habe. Raha manofa ny trano ianao dia mila mifandray amin'ny mpitantana na ny tompony mba hiresaka momba ireo fanovana ireo.
Mba hanovana ny haben'ny dabam-pako ankapoben'ny sarony mena, dia mila mameno ny Taratasy Fangatahana Fako eto ambany ny tompony na ny tompon'andraikitra mpitantana ny trano.
Toeram-pisakafoanana sy fambolena zaridaina
Raha hitanao fa mitobaka tsy an-kiato ny dabam-pambolenao na ny zaridainanao, dia azonao atao izany mahazo dobo fanampiny ao anatin'izany ny dabam-pako fanodinana lehibe kokoa ho an'ny sara fanampiny fanampiny ampidirina amin'ny vidin'ny filankevitry ny fanananao.